Pinfluencer: Ahịa na Nchịkọta Site Ntụtụ zụọ | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 2, 2012 Monday, March 4, 2013 Douglas Karr
Ndị ụlọ ọrụ achọtala ụfọdụ nsonaazụ dị egwu Pinterest iji mee ka ahịa ha rute. Dị ka ọ bụla na-elekọta mmadụ n'elu ikpo okwu, Pinterest nwere ya ahịa omume kasị mma, ohere mkpọsa na influencers.
Pinfluencer bụ ahịa na nchịkọta ikpo okwu na-integrates na gị na saịtị si nchịkọta iji nye gị nloghachi na data ntinye ego. Ha agbakwunyela ihe ọhụrụ Pinterest nkwalite ikpo okwu nke ahụ na-enyere gị aka ịnabata ọkwa na Facebook, họrọ site na ọtụtụ ụdị asọmpi na egwu na-enweta na ego.
Mgbe onye ọrụ tinye foto na bọọdụ Pinterest, ọ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site na ngosipụta dị mfe nke uto onwe onye na nkwado nke ngwaahịa. Ihe ọ sọrọ ya bụrụ ya kpatara ya, ihe na-eme n’azụ ntụtụ nwere ọtụtụ njirimara nwere ike ịba uru na njirimara. Mana anyị kwenyere na nke kachasị dị mkpa bụ na: ntụtụ na -emepụta ụzọ ịzụta. Blog Pinfluencer
Pinfluencer na-enye atụmatụ ndị a:
Top mkpọ na ilekiri - Pinfluencer na-atụgharị egwu gị kachasị na ntanetị - ma site na weebụsaịtị na mbadamba gị. Hụ nke ọdịnaya kachasị emetụta na otu ụwa si emeghachi omume na katalọgụ gị.
Top Viral Boards - Pinfluencer na-agbakọ akara aka maka mbadamba ọ bụla na-enyere gị aka ịza nke mbadamba kachasị na-emetụta ma na-enyere gị aka ikpebi bọọdụ ndị ị ga-elekwasị anya. Jiri otu ntughari lee ntụtụ nke mbadamba bọọdụ ahụ.
mpi - you na-enwetakwu ihe atụ na ahịhịa karịa asọmpi gị? Kedu nke ngwaahịa na mbadamba ndị asọmpi gị kachasị ewu ewu na pinterest?
Ndị na-egosi arụmọrụ igodo - Tụọ njikọ gị Pinterest Brand Engagement site na Pin / Day, Ndị na-eso ụzọ / Day. Jiri virality metric nke Repins / Pin na Clicks / Pin ka ịbanye aka. Ego ha nbata / Pin na-enweta ego ha site na ntụtụ.
Tags: pinfluencerPinterestnyocha pinterestpinterest zoopinterest nkwalite
Nov 3, 2012 na 2:56 AM
Daalụ maka nke a, abughi m onye nwere mmasị na pinterest mana ọ kwesịrị ya ogologo ụzọ iji nweta ahịa? 🙂 Aga m anwale nke a.